News - ihe bụ onyinyo anya
kedu ihe bụ nku anya
Onyinye anya bụ ihe ịchọ mma nke etinyere na nku anya na n'okpuru nku anya. A na-ejikarị ya eme ka anya onye nwe ya pụọ ​​ma ọ bụ mara mma.
Onyinyo anya na-agbakwụnye omimi na akụkụ na anya mmadụ, na-agbakwunye ụcha anya, ma ọ bụ na-adọrọ uche gaa na anya. Onyinyo anya na-abata n'ọtụtụ agba na textures. A na - eme ya site na ntụ ntụ na mica, mana enwere ike ịchọta ya na mmiri mmiri, pensụl, ma ọ bụ ụdị mousse.
N'ebe Ọdịda Anyanwụ, a na-ahụ ya dị ka ihe ịchọ mma nwanyị, ọbụlagodi mgbe ụmụ nwoke na-eji ya. Ná nkezi, ohere dị n’agbata nku anya na nku anya dị okpukpu abụọ karịa nke ụmụ nwanyị. N'ihi ya, anya anya na-achagharị anya na-eme ka mpaghara a saa mbara ma nwee mmetụta dị ka nwanyị.
Ọtụtụ mmadụ na-eji onyinyo anya naanị iji meziwanye ọdịdị ha, mana a na-ejikarị ya eme ihe nkiri na egwuregwu ndị ọzọ, iji mepụta ihe a na-echefu echefu, ya na agba na ọbụna ọchị.
Dabere na ụda akpụkpọ ahụ na ahụmịhe, nsonaazụ nke onyinyo anya na-ewetara ọmarịcha ma nweta nlebara anya. Ojiji nke ndò anya na-anwa ịmegharị onyinyo anya nke ụmụ nwanyị ụfọdụ na-egosipụta n'ihi ụcha iche dị iche na nku anya ha. Onyinye anya nke anụ ọhịa nwere ike ịdị n'ebe ọ bụla site na nchapụta mara mma na nku anya mmadụ, na ụda pinkish, ma ọ bụ ọbụna ọla ọcha.